Viber မှတဆင့် ညစ်ညမ်းပုံများ ပေးပို့သူကို အရေးယူရာ လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးရမိ
တာချီလိတ်မြို့ ၊ ရန်အောင်မြေရပ်ကွက်နေ မောင်ဝဏ္ဏသည် စက်တင်ဘာ ၂၅ရက် မွန်းတည့်ချိန်ခန့်က ၎င်း၏ဇနီးပိုင် iPhone အား အင်တာနက်ဖွင့်ကြည့်ရာ Viber မှတဆင့် ဖုန်းအတွင်းသို့ ပုံများ ဆက်တိုက်ဝင်ရောက်လာသဖြင့် ကြည့်မိရာ ညစ်ညမ်းပုံများ ဖြစ်နေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ယင်းကြောင့် ပုံများပေးပို့သည့် ဖုန်းနံပါတ်အား စစ်ဆေးရာ (+၉၅၉ ၄၂၈၂၂၄***)နံပါတ်ဖြစ်ပြီး ထိုနံပါတ်မှာ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ မယ်ခေါင်ရပ်ကွက်နေ သက်နိုင်ထွန်း(၃၆နှစ်)၏ ဖုန်းဖြစ်ကြောင်း သိရသဖြင့် ဇနီးဖြစ်သူ၏ဖုန်းအတွင်းသို့ ညစ်ညမ်းပုံများ ပေးပို့သူအား အရေးယူပေးပါရန် ဖုန်းပိုင်ရှင်၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မောင်ဝဏ္ဏက တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းရာ တာချီလိတ်မြို့မရဲစခန်းက (ပ)၁၉၇/၂၀၁၄ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၂၉၂(က)ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေားူခဲ့သည်။
At 9/29/2014 05:42:00 PM No comments:
At 9/29/2014 05:39:00 PM No comments:
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ ကြာအင်း တိုးဂိတ်တွင် စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် ည ၉ နာရီ ခွဲချိန်ခန့်၌ ဇော်ကုန်း ကျေးရွာ ဘက်မှ မော်လမြိုင်မြို့သို့ မောင်းနှင်လာသော ကာဒီနား ကားအား ရပ်တန့်စစ်ဆေးရာ DKBA အဖွဲ့ စောဆန်းအောင်၏တပည့် ဖြစ်သူတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးထံမှ စိတ်ကြွဆေးပြားနှင့် တရားမ၀င် လက်နက်များ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း မုပွန်ရဲစခန်းမှ သတင်းရရှိ သည်။
At 9/29/2014 03:07:00 PM No comments:
သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခံရ၍ သေဆုံးသွားသော လူငယ်၏မိသားစုကို ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဖြင့် ညှိနှိုင်းဟုဆို
သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခံရ၍ သေဆုံးသွားသောရှမ်းလူငယ် စိုင်းပေါင်းပေါင်း (ခ) စိုင်းရန် အောင်ရှင်းအမှုကို လာမည့် အင်္ဂါနေ့၌ တရားရုံးချိန်း ချိန်းဆို ထားစဉ်အတွင်း မြို့မပြည်သူစစ်အဖွဲ့က သေဆုံးသူမိသားစုထံသို့ ကျပ်သိန်းတစ်ရာနှင့် အမှုကျေ အေးရန် လာရောက်ညှိနှိုင်းနေ ကြောင်း မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
At 9/29/2014 03:02:00 PM No comments:
မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးပုံတော်ကို မဖွယ်မရာပြုမူပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကာ Facebook ပေါ်တင်သူအား စုံစမ်းဖော်ထုတ်၍ အရေးယူသွားမည်
မန္တ လေးမြို့ မြနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော် ကြီးအတွင်းရှိ မင်းတုန်းမင်း တရား ကြီးပုံတော်နှင့်အတူ ယှဉ်တွဲလျက် မဖွယ်မရာပြုမူပြီး ရိုက်ကူး ထားသည့် ဓာတ်ပုံများမှာ ယခုရက်ပိုင်းတွင်လူ မှုကွန်ရက်ဖြစ်သော Facebook စာမျက်နှာများပေါ်၌ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိ သောကြောင့် လိုအပ်သည့် စုံစမ်း စစ်ဆေးအရေးယူမှုများကို လုပ် ဆောင်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှေး ဟောင်းသုတေသန၊ အမျိုးသားပြ တိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်များဦးစီးဌာန (မန္တလေး) မှ သိရသည်။
At 9/29/2014 02:57:00 PM No comments:
လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေ့ရှိက တန်ဖိုး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပေးပြီး လိုင်စင်လုပ်ရမည်
မန္တလေး (မဇ္ဈိမ)။ ။ လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ်များ မောင်းနှင်အသုံးပြုမှုကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး၍ ဆိုင်ကယ်၏ ကာလတန်ဖိုး ၅၀ ရာခိုင် နှုန်းကို ဒဏ်ကြေးပေးသွင်း၍ လိုင်စင်ပြုလုပ်စေမည့် အစီအစဉ်ကို စက်တင်ဘာ၂၄ ရက်မှ စတင်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု မန္တလေးတိုင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ဆိုင်ကယ် အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကာလတန်ဖိုးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါတန်ဖိုး၏ ငါးဆယ်ရာ ခိုင်နှုန်းကို ဒဏ်ကြေးအဖြစ် ပေးဆောင်စေကာ နောက်ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတွင် ကနဦးယာဉ်မှတ်ပုံ တင်ပြုလုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။
At 9/29/2014 02:52:00 PM No comments:
အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသားက ဆွံ့အမိန်းကလေးကို အလိုမတူဘဲ သားမယားပြုကျင့်
ဆွံ့အနေသူ အမျိုးသမီးငယ်(အပျို) တစ်ဦး မကျီးတော ရိုးမအတွင်း ဆိတ်ကျောင်းနေစဉ် အိမ် ထောင်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးက သားမယား ပြုကျင့်ခဲ့သဖြင့် တိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် စစ် ဆေးခဲ့ရာမှ ကိုယ်ဝန်တစ်လရှိကြောင်း သိ ရှိရသဖြင့် အလိုမတူဘဲ သားမယားပြုကျင့် ခဲ့သူအား အရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်းသ ဖြင့် မြိုင်မြို့နယ် ဗဟင်းနယ်မြေ ရဲစခန်းမှ (ပ) ၄၄/၂ဝ၁၄ ပုဒ်မ ၃၇၆ အရ တရားခံ အမျိုးသားအား အမှုဖွင့် အရေးယူထား ကြောင်း သိရသည်။
At 9/29/2014 02:42:00 PM No comments:
ကားရပ်နားသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စကားများရာမှ ပါတီတစ်ခု၏ မြို့နယ် စည်းရုံးရေးမှူး နှင့် မြန်မာ နေရှင်နယ် လိဂ် ပြိုင်ပွဲ ၀င် ရတနာပုံအသင်းသားများ အပြန်အလှန် တရားစွဲဆိုရန် စီစဉ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရတနာပုံယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းမှ ဘောလုံးသမားများနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါ တီသစ်၏ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ နယ်၊ စည်းရုံးရေးမှူး၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ တို့သည် စက်တင်ဘာ၂၃ ရက် ည ၈ နာရီ အချိန်ခန့်က တာမွေမြို့ နယ်၊ နတ်မောက်ရပ်ကွက်၊ ဖိုးစိန်လမ်းပေါ်ရှိ ဘောလုံးအသင်းသား များ၏ အဆောင်ရှေ့တွင် ကားရပ်ရာမှ စကားများရန်ဖြစ်ကြပြီး တာမွေမြို့မရဲစခန်းတွင် အပြန်အလှန် အမှုဖွင့်ရန် စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း နှစ်ဖက်လုံးမှ တာ ၀န်ရှိသူများက ပြောကြသည်။
At 9/29/2014 01:05:00 PM No comments:
သင် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကို ရောက်ပြီဆိုပါတော့။ ဆံပင်ပဲညှပ်ညှပ်၊ ဘာပဲ လုပ်လုပ် ခေါင်းတော့ အရင်လျှော်ခိုင်းကြတာချည်းပဲ ဟုတ်။ သင်က ခုလေးတင်အိမ်မှာ လျှော်လာတာလို့ပြောရင် ခုထပ်လျှော်မှ ညှပ်ရတာ အဆင်ပြေမယ်၊ ဆံပင်ဆိုးရတာ အဆင်ပြေမယ်၊ ဒီကလျှော်ပေးတဲ့ ရှန်ပူက ဘယ်လိုကောင်းတာစသဖြင့် အခြေအတင်လေးတွေ ရှိလာပြီပေါ့။ အိုခေ သူတို့ပြောသလို ခေါင်းလျှော်ဖို့ လက်ခံလိုက်ပါပြီ။ အဲ့ဒီနောက်မှာ ကိုယ်သွားနေကျ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်က ဆံပင်ညှပ်ဆရာတွေ ပြောလေ့ရှိတဲ့ မုသားစကားပါးပါးလေးတွေကို ဖော်ပြပေး လိုက်တယ်နော်။
At 9/29/2014 12:50:00 PM No comments:
တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေကြောင့် တကယ်အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေ နစ်နာရပါတယ်ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်လ် ခင်ရူပ
မော်ဒယ်လ် ခင်ရူပနဲ့ တွေ့ဆုံခိုက် ခုလတ်တလော မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဆက်မပြတ်ဆိုသလို ကျင်းပပြုလုပ်လာတဲ့ မော်ဒယ်လ်ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမ ရရှိခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ ခံစားချက်အမြင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါ “အရင်တုန်းက ပြိုင်ပွဲတွေ ပြိုင်ခဲ့စဉ်က ညီမအသက် ၁၇နှစ်ပေါ့။ အဲဒီ့တုန်းက စိတ်ခံစားချက်က ပြိုင်ချင်စိတ်
At 9/29/2014 12:48:00 PM No comments:
နှစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့တွေကြား တိုက်ပွဲတွေဟာ ထိုင်းနယ်စပ် ကနေ နှစ်မိုင် သုံးမိုင်ဝန်းကျင်အကွာမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့
At 9/29/2014 12:41:00 PM No comments:
At 9/29/2014 12:33:00 PM No comments:
At 9/29/2014 12:28:00 PM No comments:
ဆိုဗီယက်အင်ပါယာ တည်ထောင်သူ လီနင်ရုပ်တုကြီး ဖြိုချခံရ
ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ကာကီဗ်မြို့ခံတွေက ဆိုဗီယက်အင်ပါယာကို တည်ထောင်သူ လီနင်ရဲ့ ရုပ်တုကြီးကို ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့က ဖြိုချလိုက်ပါတယ်။
ဖြိုချခံလိုက်ရတဲ့ လီနင် ရုပ်တုကြီးဟာ ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာတော့ အကြီးဆုံး ဖြစ် ပါတယ်။
At 9/29/2014 12:25:00 PM No comments:
ဖုန်းထဲမှာလက်ကျန်ငွေမရှိ်တော့လို့ငွေထပ်ဖြည့်ဖို့်မက်ဆေစ့်(massage)တွေဖုန်း
တလုံးကိုသုံ့ ခါ ထက်မနည်းပေးပို့ေ နခြင်းကမြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း(MPT)
At 9/29/2014 12:20:00 PM No comments:
အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေ (သို့) တရေးနိုးပြန်အိပ်မရတဲ့ညတွေမှာ ဒီအချက်ကလေးတွေအတိုင်း ကြိုးစားကြည့်ပါ
ညဘက်တွေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အိပ်လို့မရဘူး ဆိုပါစို့၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း ညသန်းခေါင်းကျော်အချိန်မှ တရေးနိုးပြီး ပြန်အိပ်လို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အတင်းပြန်အိပ်ဖို့ ကြိုးစားမယ့်အစား ဒီနည်းလေးတွေအတိုင်း လုပ်ကြည့်ပါလား။၁။အိပ်ယာပေါ်က ဆင်းလိုက်ပါ။
ဘယ်လိုမှ အိပ်မပျော်တော့တဲ့ မျက်လုံးကို အတင်းမှိတ်ပြီး အိပ်ပျော်အောင် ကြိုးစားနေမယ့်အစား အိပ်ယာပေါ်ကဆင်းပြီး တစ်ခြားအခန်းမှာ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားတစ်နေရာမှာ တစ်ခုခုလုပ်နေလိုက်ပါ။ မီးမှိန်ဖျော့ဖျော့ထွန်းထားတဲ့ အခန်းမှာ သီချင်းနားထောင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မီးဖိုချောင်ထဲ ၀င်ထိုင်ပြီး ရေသောက်နေလိုက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်အတွက် အေးအေးချမ်းချမ်းရှိပြီး စိတ်ငြိမ်မယ့်အရာတစ်ခုခုပေါ့။
At 9/29/2014 11:09:00 AM No comments:
တယ်လီနော၊ အူရီဒူးနဲ့ MPT ဈေးကွက် ဘယ်လိုယှဉ်ပြိုင်ကြမလဲ
အူရီဒူးဆင်းမ်ကတ်များကို ဇူလိုင် ၃ဝ ရက်က ကနဦး စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး ဩဂုတ် ၁၅ ရက်တွင် ဝန်ဆောင်မှုများကို တရားဝင်စတင်လိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ထို့နောက် စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကလည်း ကျပ် ၁၅ဝဝ ဆင်းမ်ကတ်များကို ပြင်ပအရောင်းဆိုင် များတွင် စတင်ရောင်းချပေးခဲ့သည်။ တယ်လီနောကလည်း စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် မန္တလေး၌ ဆင်းမ်ကတ်များကို စတင်ရောင်းချပေးကာ ဝန်ဆောင်မှုများကို စတင်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။အော်ပရေတာလေးခုအနက် အော်ပရေတာသုံးခုက ဝန်ဆောင်မှုများကို စတင်လိုက်ပြီးနောက် ယင်းကုမ္ပဏီသုံးခု အနေဖြင့် သုံးစွဲသူများကို မည်သို့စွဲဆောင်မည်၊ ဈေးကွက် မည်သို့ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဆိုခြင်းမှာ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ချင်စရာဖြစ်လာကြောင်း လေ့လာသူများက ဆိုသည်။
At 9/29/2014 11:07:00 AM No comments:
စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းတွင် အနောက်တောင်မုတ်သုံလေ မြန်မာနိုင်ငံမှဆုတ်ခွာနေပြီး မိုးတိမ်တောင်ကြောင့်ဖြစ်လာသော မိုးကြိုးပစ်မည့်အန္တရာယ်ကို သတိပြုရန်လိုကြောင်း ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်က သတိပေးသည်။
အနောက်တောင်မုတ်သုံလေသည် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းအပြင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှပါ ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကပြောသည်။ ထို့ ကြောင့် မုတ်သုံဆုတ်သည့် လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် မိုးတိမ် တောင်အန္တရာယ် ရှိနေသည့်အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နေရာ ကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ကြောင်း သတိပေးသည်။
At 9/29/2014 11:02:00 AM No comments:
ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တွင်နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်တစ်ဦး ခြေထောက်ပေါ်တွင်ဘုရားပုံများထိုးထားတွေ့ ရှိ
ယမန်နေ့ ၂၈. ၉. ၂၀၁၄ နေ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တွင်နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်တစ်ဦး ခြေထောက်ပေါ်တစ်ကိုယ်လုံးတွင် ဘုရားပုံတော်ကို တက်တူးထိုးပြီး တက်လာလို့ ၎င်းနိုင်ငံခြားသားအားရွှေတိဂုံဂေါပကအဖွဲ့ 
’’ ကျွန်တ်ာတို့လူတွေအုံနေတာတွေ သွားကြည့်တော့ နိုင်ငံခြား တစ်ယောက်ကိုဂေါပကတွေ စစ်ဆေးမေးနေ တာတွေ့တယ်။ခြေထောက်တွေမှာ အားလုံး တက်တူးထိုးထားတယ်။ အကုန်
At 9/29/2014 10:59:00 AM No comments:
ပုံမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ ကလေးငယ်ကို သိကြမှာပါ။ Giuliano Stroe လို့ အမည်ရတဲ့ ရိုမေနီးယား က အသက် ၉ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေး ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ အသန်မာဆုံး ကလေးငယ်အဖြစ် ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတင် မကပဲ သူ့ရဲ့ ၇ နှစ်အရွယ် ညီငယ်လေးပါ စံချိန်တင် ထားတာပါ။ ယခု နောက်ဆုံးရ သတင်းကတော့ သံတိုင်ဘားတန်းကို လက်ထောက်လို့ ကင်းမြီးကောက်ထောင် ပုံစံနဲ့ ဒိုက်ထိုးနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
At 9/29/2014 10:54:00 AM No comments:
မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များက ဆီးရီးယားနိုင်ငံရှိ ISIS ရေနံသန့်စင်စက်ရုံများကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်
အမေရိကန် ဦးဆောင်သော မဟာမိတ် တပ်ဖွဲ့ တိုက်လေယာဉ် များက ယမန်နေ့တွင် ဆီးရီးယားရှိ ISIS တို့ ထိန်းချုပ်သော ရွှေ့ပြောင်း လွယ် ရေနံသန့်စင် စက်ရုံ လေးခုနှင့် ကွပ်ကဲရေးဌာန တစ်ခုကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီး လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ အမေရိကန်၊ ဆော်ဒီ နှင့် ယူအေအီး နိုင်ငံ တိုက်လေယာဉ် များက တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပစ်မှတ်များကို ထိမှန်ပျက်စီး ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန် ဗဟိုကွပ်ကဲရေး ဌာနမှ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
At 9/29/2014 10:44:00 AM No comments:
ရွှေတူးသူ များလာပြီးနောက် လှေခွင်းတောင်အနီးဝန်းကျင်တွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်
နေပြည်တော် ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ပျဉ်းမနားအရှေ့ဘက်၊ ပေါင်းလောင်းဆည်အနီး ၊ လှေခွင်းတောင်ဝန်းကျင် ရွှေ ထွက်သည့်နေရာတွင် စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်မှစ၍ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
‘‘ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်လိုက် ပြီ၊ ဘယ်သူမှသွားမရတော့ဘူး။ စစ်သားတွေနဲ့ ရဲတွေတော့ စောင့် ကြည့်နေကြတယ်။ နယ်ကလာတဲ့သူတွေလည်း ပြန်သွားကြပြီ’’ဟု ကျည်တောင်ရွာမှ ရွှေသွားရောက် တူးဖော်သူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
At 9/29/2014 10:41:00 AM No comments:
IS အား လေကြောင်း ဗုံးကြဲစစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်သည့် ယူအေအီး အမျိုးသမီးလေယာဉ်မှူးကို မိဘများက စွန့်လွှတ်
အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံတော် အဖွဲ့ IS အား
လေကြောင်း ဗုံးကြဲစစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်
သည့် ယူအေအီး အမျိုးသမီးလေယာဉ်မှူး၏
မိဘများက ၎င်းကို မိသားစုမှ စွန့်လွှတ်ကြောင်း
ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟု ဒေးလီးမေးလ်
သတင်းတစ်ရပ် တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယူအေအီးနိုင်ငံအတွက် F-16 တိုက်လေယာဉ်ဖြင့် IS အဖွဲ့အား လေကြောင်းမှ ဗုံးကြဲ စစ်ဆင်ရေး ဆင်နွဲနေသူ မာရီယမ် အယ်လ် မန်ဆူရီ၏
At 9/29/2014 10:36:00 AM No comments:
Walter Earl Morrison လို့ အမည်ရတဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ် လူငယ်ဟာ UPS လို့ခေါ်တဲ့ အမေရိကန်က သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္မဏီ တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
At 9/29/2014 10:34:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ပြီသီချင်း ဖွင့်မယ်ဆိုရင် . . .
စနေနေ့ဆိုတော့ မိသားစုဟိုဒီသွားဖို့ ကားလေးနဲ့ ထွက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွှေဂုံတိုင်မီးပွိုင့်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ စိတ်ညစ်စရာ၊ စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်စရာတွေနဲ့ တိုးတော့တာပဲ။ မီးပွိုင့်မှာ ယာဉ်ထိန်းရဲက ပျာပျာသလဲနဲ့ ဘယ်လိုအကောင်ကြီးကြီး လာသလဲတော့ မသိ။ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ ကားတွေလည်း လေးဘက်လေးတန် တန်းစီပြီး ပိတ်ကုန်ရော၊ ယာဉ်ထိန်းရဲပုံစံက ရေးကြီးသုတ်ပျာနဲ့ လမ်းတွေကိုပိတ်ပြီး အကွေ့ယာဉ်ကြောဘက် အကြာကြီးစောင့် လမ်းရှင်းပေးနေတော့ အရေးကြီးတဲ့ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုး သွားမှာမို့လည်းလို့ စိတ်ဝင်စားပြီး ကြည့်မိလိုက်တယ်။
At 9/29/2014 10:32:00 AM No comments:
၉၆၉ အဖွဲ့ကို သီရိလင်္ကာက BBSနဲ့ ပူးပေါင်းမယ်လို့ ဦးဝီရသူဆို
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို ​ရောက်ရှိနေတဲ့ ​အရှင်ဦးဝီရသူက ​သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက ​Bodu ​Bala ​Sena ​(BBS) ​အဖွဲ့ဒါမှမဟုတ် ​Buddhist ​Force​လို့ခေါ်တဲ့ ​ဗုဒ္ဓဘာသာ ​အဖွဲ့နဲ့ ​ပူးပေါင်းပြီး ​ဗုဒ္ဓဘာ
သာကို ​ကာကွယ်သွားမယ်လို့ ​ပြောလိုက်ပါတယ်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ ​စက်တင်ဘာလ ​၂၈ ​ရက်၊ ​မနေ့တုန်းက ​သံဃကောင်စီ ​အစည်းအဝေးကြီး ​ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး ​အရှင်ဦးဝီရသူကလည်း ​တက်ရောက် ခဲ့တာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
At 9/29/2014 10:27:00 AM No comments:
လက်ကျန်ငွေ ၂၀၀ ကျန်သည့် Message ရောက်ပါက ပြန်လည်စစ်ဆေးရန်လို
MPT ဆင်းမ်ကတ် အသုံးပြုသူများ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့ ယနေ့မနက်ပိုင်းမှစတင်၍ “လက်ကျန်ငွေ ၂၀၀ ကျပ်သာ ကျန်ရှိတော့သည်” ဟူသည့် SMS များ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ယင်းမှာ System Error ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း MPT မှ စုံစမ်းသိရသည်။
MPT ၏ အဆိုပါ SMS ကို လက်ခံရရှိသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ အမှန်တကယ် ဖုန်းအသုံးပြုခမှာ လက်ကျန် ၂၀၀ ကျပ်သာ ကျန်ရှိတော့ခြင်း မဟုတ်သဖြင့် ဖုန်းဘီလ်များကို စစ်ဆေးပေးကြစေလိုကြောင်း MPT မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
At 9/29/2014 10:26:00 AM No comments:
ပျောက်ဆုံးနေသော ရဟတ်ယာဉ် တစ်ရက်ကျော်သည့်တိုင် ရှာမတွေ့သေး
ပျောက်ဆုံးတောင်တက်သမား နှစ်ဦးအား ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်စဉ် ပျောက်ဆုံး သွားသော B4 ရဟတ်ယာဉ်ကို ရှာဖွေမှုများအရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်သော်လည်း တစ်ရက်ကျော် ကြာသည့်တိုင် အဆက်အသွယ်မရရှိသေး ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံAdvance Aviationမှ ထူးဖောင်ဒေးရှင်းကငှားရမ်းထားသော B4 ရဟတ်ယာဉ်မှာ ပူတာအိုလေဆိပ်မှ တဟွန်ဒမ်းရွာသို့
At 9/29/2014 10:22:00 AM No comments:
ဆိုမာလီစစ်သွေးကြွများက အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ကျောက်တုံးနှင့် ထုသတ်
ဆိုမာလီယာတောင်ပိုင်း၊ ဘာရာဝီမြို့တွင် သောကြာ (စက်တင်ဘာ ၂၆) နေ့က အယ်လ်ရှာဘတ်တို့၏ အစ္စလမ္မစ် ရှာရီယာ တရားရုံးတစ်ခု
မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် ဆိုမာလီ အယ်လ်ရှာဘတ် စစ်သွေးကြွ များက ကျောက်တုံးနှင့် ထုသတ်ခဲ့ကြ သည်။
At 9/29/2014 10:16:00 AM No comments:
သင်မြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံဟာ အမျိုးသမီးတစ် ဦးနှာခေါင်း လှချင်လို့ နာခေါင်း သွားပြင်ခဲ့တဲ့ ပုံပါဖြစ်ပါတယ်။နှာခေါင်းမပြင်ခင် အရင်ဦးဆုံး နာကျဉ်မှုဝေဒနာ မခံစားရအောင်ဆိုပြီးထို အမျိုးသမီးအားမေ့ဆေးပေးဖို့ လူနာနဲ့နှာခေါင်းပြင်ပေးမဲ့ ဆရာ သဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။
မေ့ဆေးလည်းပေးပြီးရော လူနာမှာလည်း လင်ငုတ်တုတ် ဘယ်ချိန်က ရလိုက်မှန်းမသိရသွားခဲ့တဲ့အဖြစ်ကို လှို့ဝှက် cctv မှrecord မိထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။
At 9/29/2014 10:11:00 AM No comments:
အင်ဒိုနီးရှားတွင် လိင်တူဆက်ဆံမှုနှင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူခံရရင် ကြိမ်ဒဏ်ချမှတ်ရန် ဥပဒေပြဌာန်း
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အာချေးပြည်နယ်မှာ လိင်
ကြိမ်ဒဏ်အချက် ၁၀၀ ပြစ်ဒဏ်ချဖို့
ဥပဒေပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကနေ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ရရေး နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် ကြိုးပမ်းခဲ့ရပြီး အစ္စလာမ္မစ်ဘာသာဥပဒေကို တရားဝင် ကျင့်သုံး ခွင့်ရတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားပြည်နယ်ဖြစ် လာပါတယ်။ လိင်တူဆက်ဆံသူ ဘယ်သူမဆို ကြိမ်ဒဏ်အချက်
At 9/29/2014 10:08:00 AM No comments:
ဆွေမျိုးများကအရှင်လတ်လတ် မြေမြုပ်ခဲ့သော်လည်း လမ်းသွား လမ်းလာကြောင့် အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည့် ကလေးငယ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဥတ္တာပရာဒေ့ရှ် ပြည်နယ်တွင် လမ်း
သွား လမ်းလာ တစ်ဦးက မြေကြီးများ လှုပ်ရွ
နေသည်ကို တွေ့ ရှိ တူးဖော်ရာမှ အရှင်လတ်
လတ် မြေမြုပ်ခြင်း ခံထားရသည့် ခုနစ်နှစ်
အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦးကို တွေ့ရှိပြီး
ကလေးမလေးကို မိသားစုဝင်များ ကိုယ်တိုင်
At 9/29/2014 10:02:00 AM No comments:
အဓမ္မ ပြုကျင့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအခြားအမျိုးသား တစ်ဦးကို အကူအညီ တောင်းခဲ့သော်လည်း ထပ်ဆင့် အဓမ္မ ပြုကျင့်ခံရ
အမေရိကန် နိုင်ငံ နယူးယော့ခ်တွင် အမျိုးသား တစ်ဦး၏ အဓမ္မ ပြုကျင့်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးမှာ အခြား အမျိုးသား တစ်ဦးကိုအကူအညီ တောင်း ခဲ့သော် လည်း အကူအညီမရဘဲ ထပ်ဆင့် အဓမ္မ ပြုကျင့်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
သြဂုတ် ၃၁ရက် နံနက်ခင်း ၅ နာရီခန့် အချိန်က One Last Shag ဆိုသည့် ဘားဆိုင်မှ အိမ်သို့ ပြန်လာသည့် အသက် ၃၁နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို မျက်နှာစိမ်း အမျိုးသား တစ်ယောက်က အတင်းပွေ့ ဖက် နမ်းရှုပ်ကာ မြေပေါ် တွန်းလှဲ၍ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ် မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ကာ အဓမ္မ ပြုကျင့်သည်။ ယင်းအမျိုးသားမှာ ထိုသို့ အတင်း ဗလ္လက္ကာယ ပြုကျင့်ပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ကို ယူပြီး ထွက်ပြေး သွားကြောင်း ဘရွတ်ကလင်း တရားရုံးတွင် အဆိုပါ အမျိုးသမီးက ထွက်ဆိုသည်။
At 9/29/2014 09:54:00 AM No comments:
အစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် အသတ်ခံရမှု လူ ၂ ဦးကို သေဒဏ်ပေး
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ၀ီဂါဒေသက ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်းတဦးကိုသတ်ဖြတ်မှုနဲ့ လူ ၂ ဦးကို သေဒဏ်ပေးလိုက်ပြီး ၁ ဦးကိုတော့ တသက်တကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုပါတယ်။
၀ီဂါဒေသက ကက်စ်ဂါ အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေ တရားရုံးမှာ မနေ့က အမှုကို ကြားနာပြီး ချက်ချင်း ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
At 9/29/2014 09:51:00 AM No comments:
Miss Asia Pacific World အဖွဲ့က မေမြတ်နိုး၏မိခင်ကို တရားစွဲဆိုရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
Miss Asia Pacific World ၏ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် အင်ဒရေဂျန်က မေမြတ်နိုး၏မိခင်ကို ရာဇဝတ်မှု စွဲချက်များဖြင့် တရားစွဲရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
အဖွဲ့၏ တာဝန်ခံကော်မရှင်နာဖြစ်သူ အင်ဒရေဂျန်က မေမြတ်နိုးသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ သတင်းထောက် ၁ဝဝ ခန့်ပါဝင်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အဖွဲ့က သူမကို ခေါင်းအစခြေအဆုံး ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရန် ဖိအားပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ ထင်ရှားသူများနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖျော်ဖြေ မှုများ ဆောင်ရွက်ရန် ဖိအားပေး စေခိုင်းခဲ့သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ ထိုမှားယွင်းသော ပြောဆို မှုသည် ကော်မတီ၏ ဂုဏ်သတင်း၊ ပံ့ပိုးသူများနှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သတင်းကို
At 9/29/2014 09:47:00 AM 1 comment:
အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံတော် အဖွဲ့ IS အား လေကြောင်း ဗုံးကြဲစစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်သည့် ယူအေအီး အမျိုးသမီးလေယာဉ်မှူး၏ မိဘများက ၎င်းကို မိသားစုမှ စွန့်လွှတ်ကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟု ဒေးလီးမေးလ် သတင်းတစ်ရပ် တွင် ဖော်ပြထားသည်။ယူအေအီးနိုင်ငံအတွက် F-16 တိုက်လေယာဉ်ဖြင့် IS အဖွဲ့အားလေကြောင်းမှ ဗုံးကြဲ စစ်ဆင်ရေး ဆင်နွဲနေသူ မာရီယမ် အယ်လ် မန်ဆူရီ၏ စစ်ဆင်ရေးများသည် အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏ မိဘများထံမှ ဟု ယူဆရ သည့် ကြေညာ ချက်စာတမ်းတွင် ဆီးရီးယားရှိ ရက်စက်သော ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း ပါဝင်ခဲ့သည့် အတွက် ၎င်းအား မိသားစုမှ စွန့်လွှတ်ကြောင်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
At 9/29/2014 09:43:00 AM No comments:
ခေတ်စားလာတဲ့ Hip Hop ဖက်ရှင်
Hip Hop ဂီတကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဒီနေ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲက Hip Hop Crazy လူငယ်တွေအတွက် အထာကျပြီး ဒီဇိုင်းလန်းတဲ့ Hip Hop Fashion ဝတ်စားမှုပုံစံမျိုးကို ဟစ်ဟော့ရှိုးပွဲတွေမှာသာမကဘဲ အပြင်မှာလည်း သဘောကျ နှစ်ခြိုက်စွာနဲ့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဝတ်စားလာကြတာကို တွေ့မြင်နေရပါပြီ။
အခုဆိုရင် Hip Hop နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖက်ရှင်အဝတ်အစား အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီတွေအပြင် Hip Hop Fashion မှာ မပါမဖြစ် Rapper ဦးထုတ်၊ Hip Hop Culture အရ Bling Bling လို့ ခေါ်တဲ့ အရောင်ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် ဆွဲကြိုး Accessories တွေ၊ ဖိနပ်တွေ စသဖြင့်ရှိတဲ့အထဲမှာ ဦးထုပ်၊ ဆွဲကြိုး၊ အကျီ င်္ အချို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံပုံနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင် Brand တခု ထွင်ပြီး ထုတ်ထားတဲ့ Hip Hop Fashion တွေ ဝတ်လာကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
At 9/29/2014 08:53:00 AM No comments:
လက်ကိုင်ဖုန်း နဲ့ အန္တရာယ်
မြိုင်မြို့နယ်မှာ မိုးရွာနေတုန်း လမ်းလျှောက် ဖုန်းပြောနေတဲ့သူတယောက် သူ့ဖုန်း "ပေါက်ကွဲ"တဲ့အတွက် ဒဏ်ရာရ သေဆုံးသွားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
သူ ထီးဆောင်းထားသလား၊ မိုးရေစိုနေသလား ဆိုတာတွေကိုတော့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြမထားပါ။
ဒီသတင်းကြောင့် မိုးရွာထဲ လမ်းလျှောက်သူတွေ ဖုန်းအသုံးပြုမှု ဆင်ခြင်ကြမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ဖုန်းအားသွင်းနေတုန်း အသုံးပြုရင်လည်း ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။
At 9/29/2014 08:48:00 AM No comments:
တစ်နေ့ကအင်တာနက်လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရလေသည်။ သတင်းထဲတွင် ဓါတ်ပုံလေးတစ်ပုံလည်းပါရှိလေသည်။ ဓါတ်ပုံထဲတွင် ကျောင်းဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်ထားသည့် ခလေးငယ် လေးငါးယောက် သည် အုတ်တံတိုင်းတစ်ခုကို ၀ါးလှေကားလေးဖြင့်ကျော်တက်နေသည့် ဓါတ်ပုံဖြစ်သည်။ သတင်းခေါင်းစဉ်ကတော့ အမှတ်(၁) ခဲယမ်းမီးကျောက်တပ်၏ မြေသိမ်း ယူမှုနှင့်အုတ်တံတိုင်းခတ်မှုကြောင့် ရွာခံကလေးငယ်များ ကျောင်းသွား ရာတွင်အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည် ဟူသည့်သတင်းပင်ဖြစ်ပေ တော့ သည်။ ကျွန်ပ်အနေဖြင့်ပထမတော့ အံ့သြသွားခဲ့ရပေသည်။ သို့သော် ထိုသတင်း ၏ ဇစ်မြစ်အစသည် မစုစုနွေး၏ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှ စတင်လာသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ ရပြီးနောက်တွင်တော့ အံသြခြင်းမဖြစ်ပေါ် တော့ပေ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မစုစုနွေး ကျွန်ပ်တို့ရွာသို့လာရောက်ကတည်းက ဒီလိုသတင်းမျိုးကို ကျွန်ပ်တွေ့ရ မည်ကို ကြိုတင်တွက်ဆပြီးဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့်သာယာကုန်းရွာတွင် လက်ရှိနေထိုင်နေသော ကျွန်ပ်အနေဖြင့်ဤအကြောင်းရာနှင့်ပက်သက်သည့် အကြောင်းစုံကိုအနည်းငယ်ဖော်ပြလိုပါသည်။
At 9/29/2014 08:45:00 AM 1 comment:
ကံကောင်းလို့ဆုရခဲ့တာဆိုတဲ့ Miss Myanmar World သရဖူဆုရှင် ၀ိုင်းလေး
ပြိုင်ပွဲဝင်များတွင်ကိုယ့် ထက်လှသူများပါသောကြောင့် ဆုရရှိရန် မှန်းမထားဘဲ ကံ ကောင်း၍ ဆုရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကြိုး စားမှုနှင့် ထပ်တူကျခဲ့သည်ဟု ထင်ကြောင်း Miss Myanmar World 2014ဆုရှင် ၀ိုင်းလေးက ပြောသည်။
‘‘ပြိုင်ပွဲတောက်လျှောက်အ ကောင်းဆုံးကြိုစားခဲ့တယ်။ ဆုရ ရမယ်ဆိုတာထက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးဖိုင် နယ်နေ့မှာလည်း ဆုကိုမှန်းမထား ဘဲ မထင်မှတ်ဘဲ ရခဲ့တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားမှုနဲ့ထပ်တူညီ တယ်လို့ ထင်ပါတယ်’’ဟု ၀ိုင်း လေးကပြောသည်။
Miss Myanmar World 2014 ဆုကို ၀ိုင်းလေးရရှိခဲ့သည့် အပေါ် ပရိသတ်အချို့ကနောက် ဆုံးပြိုင်ပွဲတွင် ၀ိုင်းလေးဝတ်ဆင် သည့် ၀တ်စုံအရောင်နှင့် ဗဟုသု တမေးခွန်းများမေးသည့်ကဏ္ဍ တွင် ၀ိုင်းလေး၏ဖြေဆိုမှုကိုဝေဖန် မှုများရှိခဲ့သည်။
At 9/29/2014 08:42:00 AM No comments:
လူမှုကွန်ရက်တွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့သောဓာတ်ပုံများကြောင့် မန္တလေးနန်းတော်တွင်း မဖွယ်မရာပြုလုပ်ပါက အရေးယူမည်
မြနန်းစံကျော်ရွှေနန်း တော်အတွင်း စီစီတီဗီကင်မရာ များတပ်ဆင်ပြီး မဖွယ်မရာပြု လုပ်ပါက အရေးယူ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
နန်းတော်အတွင်း မဖွယ် မရာပြုလုပ်ခြင်းများကိုအရေးယူ မည်ဟု စက်တင်ဘာ ၂၇ရက် ထုတ်မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာ တွင် ကြေညာခဲ့ပြီး ၂၈ရက်မှ စတင် အရေးယူသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ရှေးဟောင်းသုတေသန၊ အမျိုး သားပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်ဦး စီးဌာနမှ သတင်း ရရှိသည်။
At 9/29/2014 08:39:00 AM No comments:
IS အန္တရာယ် အမေရိကန် လျှော့တွက်
Islamic State စစ်သွေးကြွတွေနဲ့ ဆီးရီးယားအခြေစိုက် တခြားစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေ ပေါ်ထွက်လာတဲ့အပေါ် အမေရိကန်က လျှော့တွက်ခဲ့မိသလို သူတို့အပေါ် အီရတ်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကို ပိုတွက်ခဲ့မိတယ်လို့ အမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama ကပြောလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရထဲက တချို့တိုက်တွန်းခဲ့သလို ဆီရီးယားမှာ အလယ်အလတ်ကျတဲ့ သူပုန်တွေကို
At 9/29/2014 08:38:00 AM No comments:
ဂိုး ၄၀၀ သွင်းနိုင်မည်ဟု စိတ်မကူးခဲ့ကြောင်း မက်ဆီပြော
ဘာစီလိုနာ−အသက် (၂၅) နှစ် အရွယ်မှာပင် လာလီဂါ၌ ဂိုး ပေါင်း ၂၀၀ သွင်းနိုင်ခဲ့သည့် ဘာစီလို နာတိုက်စစ်မှူးမက်ဆီသည် ဘာစီလိုနာအသင်းက ဂရန်နာဒါအသင်းကို ခြောက်ဂိုး ဂိုးမရှိ နိုင်ခဲ့သောပွဲတွင် ဂိုး ၄၀၀ ပြည့်နှင့် ၄၀၁ ဂိုးမြောက်ဂိုးများသွင်းယူနိုင်ခဲ့သည်။
မက်ဆီသည် ဂရန်နာဒါ အသင်းဘက်သို့ နှစ်ဂိုးသွင်းယူ နိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်ဂိုးဖန် တီးပေးခဲ့သည်။ ယင်းပွဲတွင် မက်ဆီ၏ အသင်းဖော်ဘရာဇီးလက်ရွေးစင် နေမာ လည်း ဟက်ထရစ် ရရှိခဲ့သည်။
ပွဲပြီးသည့်နောက် မက်ဆီက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် စုစု ပေါင်း သွင်းဂိုး ၄၀၀ ပြည့်မည် ဟု လုံးဝစိတ်မကူးခဲ့ကြောင်း နှင့် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုများ အားလုံး အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ရေး သားဖော်ပြသည်။
At 9/29/2014 08:36:00 AM No comments:
တယ်လီနောဆင်းမ်ကတ် ပြင်ပဈေးကွက်တွင် ကျပ်တစ်သောင်းဝန်းကျင် ဈေးပေါက်
ဈေးကွက်အတွင်း မရောက်ရှိခင် ကတည်းက လူအများစု စိတ်ဝင်စားမှု အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သော တယ်လီနော ဆင်းမ်ကတ်များ မန္တလေးမြို့တော်
တွင် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့က စတင်ရောင်း ချပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း ပြင်ပဈေးကွက်တွင် ဆင်းမ် ကတ် တစ်ကတ်လျှင် ကျပ် ၁ သောင်းဝန်းကျင် အထိ ရောက်ရှိသွားကြောင်း တယ်လီနော ဆင်းမ်ကတ်ကို သွားရောက် ဝယ်ယူခဲ့သူများက ပြောကြားသည်။
At 9/29/2014 08:24:00 AM No comments:
ပစ်သတ်ခံရသည့် ဂျပန်သတင်းထောက်အမှု ဖော်ထုတ်ပေးရန် ညီမဖြစ်သူ တောင်းဆို
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ ပစ်သတ်
ခံခဲ့ရတဲ့ ဂျပန် ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် နဂအိ
ခန်းဂျီစံအတွက် အမှုမှန် ဖော်ထုတ်ပေးဖုို့
ညီမဖြစ်သူ နိုရီကို အိုဂ၀စံက စက်တင်လာ
၂၇ ရက်က ပြုလုပ်တဲ့ ရွှေဝါရောင် ၇ နှစ်မြောက်
အောက်မေ့ဖွယ်ဆုတောင်းပွဲမှာ တောင်းဆိုခဲ့ ပါ တယ်။
deadphoto ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက တဆင့် တောင်းဆိုနေတာ ၇ နှစ်ရှိ ပြီဖြစ်ပြီး ဂျပန်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း အမှုမှန်ဖော် ထုတ်ပေး ဖို့ မြန်မာအစိုးရကို အမြဲတောင်း ဆိုနေပါတယ်။
At 9/29/2014 08:23:00 AM No comments:
ဆယ်ကျော်သက်စုံတွဲ အချင်းချင်း ဓားထိုးအကြမ်းဖက်မှု များဖြစ်ပေါ်နေ၍ အမျိုးသမီးအချို့သည် မိမိ ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်နိုင်မည့် ငရုတ်ရည် ဖျန်းဆေး ဘူးငယ်လေးများဆောင်လာကြသည်ဟုသတင်း ရရှိသည်။
အဆိုပါဘူးမှာ စပရေးပုံစံ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ရန်မူ တိုက်ခိုက်ခံရပါက မျက်လုံးကို ပက်ဖျန်းလိုက်ရုံဖြင့် တစ်နာရီကျော်ကြာ မျက်လုံးဖွင့်နိုင်မည်မဟုတ်ဘဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြောင်း အဆိုပါ ဖျန်းဆေး ရေးဘူးဆောင်ထားသူ Laurel Art အနုပညာ သင်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသူအေးမြမြင့်မိုရ်က ပြော သည်။
အဆိုပါဘူးများကို ယခုလအတွင်း စတင်ရောင်းချလာပြီဖြစ်ရာ အမျိုးသမီးတစ်ထောင်ကျော် စတင်စမ်းသပ်သုံးစွဲနေပြီဟု ဂိတ်သရပါကုမ္ပဏီ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးကောင်းကျော်က ပြောသည်။
At 9/29/2014 08:19:00 AM No comments:
စိတ်ကြွဆေးပြား လေးသိန်းကျော်ပါရှိသော အထုပ်ပိုင်ရှင်ကို စုံစမ်းနေ
မြောက်ဦးမြို့နန်းတော်ရာကုန်းပေါ်မှ စိတ်ကြွဆေးပြား လေးသိန်းကျော်ထည့်ထားသည့် အထုပ်တစ်ထုပ်တွေ့ရှိခဲ့၍ ပိုင်ရှင်ကို စုံစမ်းရှာဖွေနေကြောင်း မြောက်ဦးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
ယင်းအထုပ်ကိုစက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် ညနေက တွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စိတ်ကြွဆေးပြားတန်ဖိုးမှာ ကျပ်သိန်းပေါင်းတစ်သောင်းနှစ်ထောင်ရှိသည်။ မြောက်ဦးမြို့တွင် ယခုကဲ့သို့ ပမာဏ များသောစိတ်ကြွဆေးများ ဖမ်းဆီးခဲ့ဖူးခြင်းမရှိကြောင်း မြောက်ဦးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကပြောသည်။
At 9/29/2014 08:17:00 AM No comments:
ဘင်္ဂလီ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ သတင်းတပ်သားတစ်ဦး မောင်တောတွင် ဖမ်းဆီးရမိဟုဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြောက်ပိုင်းရှိ ကျီးကန်းပြင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ဘင်္ဂလီ သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (RSO) အမည်ရဘင်္ဂါလီ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟုယူဆရသူ အမျိုးသား တစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်း မောင်တောခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အကြီးတန်း အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယာဆိန်းအာဖာဆိုသည့် အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် အဆိုပါ အမျိုးသားကို စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် RSO တပ်များရှိသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အူလာဘီကင်း စခန်းတွင် နှစ်လ သင်တန်းတက်ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေး ပေါ်ပေါက်ချက်များကို အခြေခံကာ ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
At 9/29/2014 08:13:00 AM No comments: